Matekiniki Ekusimudzira Kudzidza: Ndeapi Chaizvo Anobudirira? Chikamu 2 | Kufungisisa Kudzidziswa
Sekutaura kunoita musoro wenyaya, tatozvipira kumusoro wenyaya uyu, zvese tichitaura nezvazvo nzira dzinobudirira, vese vachitaura nezve neuromites uye nzira dzisingabatsiri. Isu takaongorora zvakare mukugadzirisa kuti zvive nyore kudzidza pamberi pehumwe matambudziko (semuenzaniso, dyslexia e kushanda kushomeka kwendangariro).
Zvizere mune zvakadzama, kutaura kune imwe ongorora naDunlosky nevamwe vaaishanda navo, tanga tadhirowa a runyorwa rwemaitiro gumi kupfuudza kuongororwa kwesainzi, kumwe kunoshanda uye kumwe kusabatsira, kuchitsanangura kugona kwavo uye kusasimba kwavo.
Nhasi tinoda kumutsidzira kutaura kwakatangwa uye tichadzokorora 6 maitiro; zvimwe zveizvi zvichadzokororwa zvichienzaniswa nenyaya yapfuura, zvimwe zvatichaona kekutanga. Dzese idzi hunyanzvi, zvinoenderana nekudzokororwa kwemabhuku atinovimba naWeinstein nevatinoshanda navo, vane chinhu chimwe vakafanana: ese anoshanda.
Ndedzipi nzira idzi?
1) KUSHANDISWA KWEMAITIRO
Uyu mubvunzo wekumisa nguva yekudzidza uye, pamusoro pezvose, yekuongorora pane kungoisa pfungwa kwavo muchikamu chimwe chete (kana mashoma mashoma epedyo). Izvo zvakaonekwa ndezvekuti, kune iyo yakafanana nguva yakashandiswa pakuongorora, vanhu vanoita izvi zviitiko muzvikamu zvakaparadzaniswa nekufamba kwenguva vanodzidza nekukurumidza, uye ruzivo rwunoramba rwakagadzikana mundangariro.
Mienzaniso yekuti ungaishandisa sei
Zvingave zvinobatsira kugadzira nhambo dzakakumikidzwa kudzokorora misoro yakafukidzwa mumavhiki apfuura kana mwedzi. Nekudaro, izvi zvinogona kutaridzika kunge zvakaoma nekuda kwenguva shoma iripo, pamwe nekudiwa kwekuvhara chirongwa chose chekudzidza; zvisinei, kupatsanurwa kwemasangano ekudzokorora kunogona kuitwa pasina kunetseka kwakanyanya kune vadzidzisi kana vadzidzisi vakatora maminetsi mashoma mukirasi kuti vaongorore ruzivo kubva kuzvidzidzo zvekare.
Imwe nzira inogona kusanganisira kupa vadzidzi mutoro wekuronga ongororo yakagoverwa nekufamba kwenguva. Ehezve, izvi zvaizoshanda zvakanyanya nevadzidzi vepamusoro-soro (semuenzaniso, chesekondari chikoro). Sezvo kupatsanura kunoda kuronga mberi, zvisinei, zvakakosha kuti mudzidzisi abatsire vadzidzi kuronga kudzidza kwavo. Semuenzaniso, vadzidzisi vangangokurudzira vadzidzi kuronga zvirongwa zvekudzidza pamazuva anochinjana neaya anodzidziswa chidzidzo mukirasi (semuenzaniso, kuronga zvirongwa zvekudzokorora neChipiri neChina kana chidzidzo chacho chadzidziswa kuchikoro. Muvhuro neChitatu) .
Kukosha kwekutanga kune chekuita nekukanganiswa pakati pekusiyaniswa kweongororo uye nekureruka kwekuwedzera kwekudzidza; muchokwadi, hunyanzvi hunonyanya kupa kuti zvikamu zvekudzokorora zvadzoserwa nekufamba kwenguva. Nepo izvo zvakanaka mhedzisiro zvatozivikanwa nekusiyana kwezvikamu zvekudzokorora, mhedzisiro yekudzoserwa kudzidza haina kuzivikanwa.
Chechipiri kutsoropodza ndechekuti vadzidzi vanogona kusanzwa vakasununguka neyakagoverwa tsika nekuti inoonekwa seyakaomarara pane ongororo dzakadzvanywa muchikamu chimwe chete chekudzidza. Uku kufunga, mune imwe pfungwa, kunoenderana nezvazviri sezvo, kune rumwe rutivi, kuchinjisa ongororo nekufamba kwenguva kunoita kuti kudzokororwa kweruzivo kuome uye, kune rumwe rutivi, iyo yekudzidzira yakasimba yekudzidzira zvinoita sezviri kushanda (inokurumidza), pamusoro zvese.pamamiriro ezvinhu apo kudzidza kunoitirwa chete kupasa bvunzo. Nekudaro, iko kubatsira kwekuparadzira tsika kunofanira kugara kuchitariswa uko kwakakosha kuchengeta ruzivo mundangariro kwenguva yakareba.
Zvinhu izvo zvichiri kuda kujekeswa
Iko kushomeka kwekutsvagurudza kunoongorora mhedzisiro yekusiyanisa kudzidza kweruzivo rwakasiyana nekufamba kwenguva, kuyedza kunzwisisa kuti zvataurwa nezvewongororo dzakatarisana nenguva zvine chokwadi here mune iyi nyaya.
Kunze kwekusavimbika kunobatsira kwekuparadzira tsika, inofanirwa kunzwisiswa kana chikamu chakasimba chekudzidzira chakakoshawo kana kuti kuchikurudzirwa.
Izvo hazvina kana kumbobvira zvijekeswe kuti ndeupi mukana wakakodzera pakati pezvikamu zvekudzokorora uye kudzosa ruzivo kuitira kuti kudzidza kuwedzerwe.
2) MAITIROKUDZIDZISWA '
Iyi nzira inosanganisira kugadzirisa mazano akasiyana kana mhando dzezvinetso zvakateedzana, zvichipesana nenzira yakajairika yekubata neshanduro yedambudziko rakafanana muchikamu chekudzidza chakapihwa. Yakave yakaedzwa kakati wandei nekudzidza math uye fizikiki pfungwa.
Zvinofungidzirwa kuti kubatsirwa kweiyi nzira kunowanikwa mukubvumira vadzidzi kuti vawane kugona kusarudza nzira kwayo yekugadzirisa matambudziko akasiyana pane kungodzidza nzira yacho pachayo kwete nguva yekuishandisa.
Muchokwadi, iyo 'inopindirana' maitiro akaiswawo zvinobudirira kune mamwe marudzi ezvidzidzo zvemukati, semuenzaniso, mundima yehunyanzvi yakabvumidza vadzidzi kuti vadzidze zvirinani kubatanidza rimwe basa nemunyori waro chaiye.
Semuenzaniso maitiro ekuishandisa
Inogona kuiswa munzira dzakawanda. Muenzaniso ungave wekusanganisa matambudziko anosanganisira kukarukuretwa kwehuwandu hwehuwandu hwezvisikwa zvakasiyana (pachinzvimbo chekuita akawanda akateedzana kurovedza aine imwecheteyo mhando yakasimba).
Tsvagurudzo yakanangana nekuchinjanisa kwemaitiro akabatana, nekudaro, zvakakosha kuti ungwarire kusanganisa zvirimo zvakasiyana zvakanyanya kubva kune mumwe (zvidzidzo pane izvi zviri kushomeka). Sezvo zviri nyore kuti vadzidzi vadiki vavhiringidze mhando iyi yekusafanira (uye pamwe isinganetsi) nekuchinjanisa kunobatsira kweruzivo rwakafambidzana, zvingave zviri nani kuti vadzidzisi vevadzidzi vadiki vagadzire mikana yeiyo 'nzira yekudyidzana'. mibvunzo.
Kudzokera kumisoro yapfuura kakawanda pasemester kunomira kudzidza ruzivo rutsva here? Ruzivo rwekare nerutsva runogona sei kuchinjika? Chiyero pakati pechinyakare nerutsva ruzivo rwunogadzwa sei?
3) MUITIRO WOKUDZIDZA / VERIFICATIONS
Iyo ndeimwe yeanoshanda kwazvo uye zvakareruka maitiro ekushandisa. Zvakareruka, iwo mubvunzo wekurangarira izvo zvakatove zvakadzidzwa, zvese kuburikidza nekuzviongorora-uye kuburikidza neyakajeka cheki. Icho chiito chekurangarira ruzivo kubva mundangariro zvinobatsira kusimbisa ruzivo. Iyi tsika inoshanda kunyangwe kana ruzivo rwuchirangarirwa pasina kutaura. Kubudirira kwakaedzwawo nekuenzanisa mhedzisiro nevadzidzi avo, pachinzvimbo chekurangarira ruzivo kubva mundangariro dzavo, vakaenda kunoverengazve ruzivo rwakambodzidzwa (tsika yekudzosa ndangariro yakaratidza kuve yepamusoro mumhedzisiro!).
Nzira yakapusa yekushandisa inogona kunge iri yekukoka vadzidzi kuti vanyore pasi zvese zvavanorangarira nezvechimwe chidzidzo chakadzidzwa.
Imwe nzira yakapusa ndeyekupa vadzidzi mibvunzo yekuyedza kuti vapindure mushure mekunge vadzidza chimwe chinhu (chingave chichienderera mberi kana pakupera kwechikamu chekudzidza) kana kupa mazano ekurangarira ruzivo kana kuvabvunza kuti vagadzire mepu dzepfungwa pachinhu ichi. ruzivo rwavanorangarira.
Kubudirira kwehunyanzvi kunoenderana nechero chikamu pakubudirira mukuyedza kutora ruzivo kubva mundangariro uye, panguva imwechete, iro basa harifanire kuve rakanyanyisa kuvimbisa kubudirira uku. Kana, semuenzaniso, mudzidzi achifukidza ruzivo nekukurumidza mushure mekuverenga uye nekudzokorora, hachisi chiyeuchidzo kubva mundangariro yenguva refu asi kungochengetwa kuri nyore mukushanda memory. Zvakare, kana budiriro dzakadzikira zvakanyanya zvinova zvisingaite kuti tsika iyi iratidze inobatsira.
Zvakare, kana iwe uine mepu dzemamepu dzakagadzirirwa kudzikamisa ndangariro, zvakakosha kuti izvi zviitwe nemoyo nekuti kugadzira mamapu nekutarisa kuzvinhu zvekudzidza zvakaratidza kusashanda zvakanyanya mukubatanidza ruzivo.
Chekupedzisira, zvakakosha kuti utarise kufunganya uko kushandiswa kwekuyedza kunogona kukonzera; zvaive zvichionekwa kuti kushushikana kunokwanisa kudzikamisa ndangariro mabhenefiti eiyi nzira (kusakwanisa kubvisa zvachose kunetseka, kubvumirana kwakanaka kungave kubvunza mibvunzo iyo mudzidzi angangokwanisa kupindura).
Inosara kujekeswa kuti ndeipi yakaenzana nhanho yekuoma kwemibvunzo yekuyedza.
4) KUSHANDISA (KUFAMBIRA MIBVUNZO)
Iyi nzira inosanganisira kubatanidza ruzivo rutsva neruzivo rwepamberi. Kune dudziro dzinoverengeka maererano nekushanda kwaro. dzimwe nguva tinotaura nezvekudzidza kwakadzama, dzimwe nguva dzekurongwazve kwemashoko mundangariro.
Muchidimbu, inosanganisira kusangana nemudzidzi nekubvunza mibvunzo nezve misoro yadzidzwa, nedonzvo rekumutungamira kuti atsanangure zvine hungwaru hukama huri pakati peruzivo rwadzidzwa.
Zvese izvi, mukuwedzera pakufarira kurangarira kwepfungwa, zvinosanganisira kuwedzera mukugona kwekuwedzera izvo zvakadzidzwa kune mamwe mamiriro.
Nzira yekutanga yekushandisa inogona kungove yekukoka mudzidzi kuti adzamise kukodha kweruzivo ruri kudzidzwa nekumubvunza mibvunzo yakadai se "sei?" kana nei? ".
Imwe nzira ndeyekuti vadzidzi vashandise nzira iyi ivo pachavo, semuenzaniso, nekungotaura zvinonzwika matanho avanoda kutora kugadzirisa equation.
Kana uchishandisa nzira iyi zvakakosha kuti vadzidzi vaongorore mhinduro dzavo nezvinhu zvavo kana nemudzidzisi; kana zvirimo zvinogadzirwa kuburikidza nemubvunzo wekushandura zvakashomeka, izvi zvinogona kunyanyisa kudzidza.
Zvingave zvinobatsira kune vaongorori kuyedza mukana wekushandisa nzira iyi kare mumatanho ekutanga ekuverenga iwo mazano anodzidziswa.
Zvinosara kuti zvionekwe kuti vadzidzi vanoshandisa here mibvunzo yekuzvigadzirira kana kuti zvirinani kuti mibvunzo yekutevera ibvunzwe nemumwe munhu (semuenzaniso, mudzidzisi).
Izvo zvakare hazvisi pachena kuti mudzidzi anofanirwa kutsungirira zvakadii kutsvaga mhinduro kana kuti ndeipi nhanho chaiyo yehunyanzvi neruzivo rwakawanikwa kuti ugone kubatsirwa neiyi nzira.
Kusahadzika kwekupedzisira kune chekuita nemabatiro: kubata nzira iyi kunoda kuwedzerwa munguva dzekufunda; inobatsira zvakakwana here kana kuti zviri nyore here kuvimba nedzimwe nzira, semuenzaniso, iko kuita kwe (wega) kugadziriswa?
5) CONCRETE MIENZANISO
Maitiro aya haadi makuru ekutanga. Uyu mubvunzo wekubatanidza mienzaniso inoshanda netsananguro dzedzidziso.
Kubudirira hakusi mumubvunzo uye kwakavakirwa pachinhu chekuti izvo zvisinganzwisisike pfungwa zvinonetsa kubata pane zvekongiri.
Iko hakuna zvakawanda zvekunzwisisa nezve iyi nzira; hazvishamise, vanyori vekudzokorora kwatinotora ruzivo urwu doma nzira iyi seinonyanya kutaurwa mumabhuku ekudzidzisa evadzidzisi (i.e. mune angangoita makumi maviri neshanu muzana ezviitiko).
Nekudaro, zvinogona kubatsira kuziva kuti kuita kuti vadzidzi vatsanangure nemazvo kuti mienzaniso miviri yakaita sei, uye kuvakurudzira kuti vabvise kiyi inoenderana neruzivo ivo pachavo zvinogona kubatsira kuita zvekare.
Uyezve, kupa mimwe mienzaniso yakafanana kunowedzera mukana weiyi nzira.
Izvo zvakaratidzirwa kuti kutsanangura pfungwa uye kuratidza muenzaniso usingapindirane kunowanzo dzidza zvakawanda nezve izvo zvinoshanda (zvisirizvo!) Muenzaniso. Saka zvinodikanwa kunyatsoteerera kune mhando dzemienzaniso dzinopihwa zvine chekuita neruzivo rwatinoda kudzidziswa; iyo mienzaniso saka inofanirwa kunge iine hukama nechakakosha zvemukati.
Iko mukana wekuti muenzaniso uchashandiswa nemazvo, ndiko kuti, kuburitsa yakawandisa isingabvumirwe musimboti, inoenderana nezinga rekugona kwenyaya yemudzidzi. Vadzidzi vazhinji vane ruzivo vanowanzo famba kuenda nyore nyore kune akakosha mazano, vadzidzi vasina ruzivo vanowanzo gara zvakanyanya pamusoro.
Iyo yakakwana huwandu hwemienzaniso yekufarira kuwanda kwemifungo yekudzidza haisati ichitsanangurwa.
Uye hazvina kujeka kuti chiyero chakadii chiri pakati peyero yekubvisa uye nhanho ye concreteness iyo iyo muenzaniso inofanirwa kuve nayo (kana iri zvakare isinganzwisisike, inogona kunge yakanyanya kunetsa kunzwisisa; pfungwa yaunoda kudzidzisa).
6) KODZERO DOUBLE
Kangani isu patakanzwa "mufananidzo wakaringana chiuru chemazwi"? Uku ndiko kufungidzira kuri pamusoro peiyi nzira. Zvikurukuru, dzidziso yekukodha kaviri inoratidza kuti kupa huwandu hweruzivo rwakafanana kunosimudzira kudzidza nekurangarira, uye ruzivo irworwo runomutsa zvimwe zvinomiririra (kuburikidza nemaitiro emifananidzo otomatiki) rinowana rubatsiro rwakadaro.
Muenzaniso wakapusa ungave wekupa chirongwa chekuona cheruzivo rwuchadzidzwa (sekumiririrwa kwesero riri kutsanangurwa nechinyorwa). Maitiro aya anogona zvakare kushandiswa nekuita kuti mudzidzi adhirowe zvaari kudzidza.
Sezvo mifananidzo ichirangarirwa zvirinani kupfuura mazwi, zvakakosha kuona kuti mifananidzo yakadai yakapihwa vadzidzi inobatsira uye inoenderana nezviri mukati zvavanotarisirwa kudzidza.
Kuchengetedza kunofanirwa kutorwa kana uchisarudza mifananidzo pamwe nerunyorwa seyakanyanya kuwoneka ruzivo dzimwe nguva inogona kuve chinovhiringidza uye chinokanganisa kudzidza.
Zvakakosha kujekesa kuti maitiro aya haafambi zvakanaka nedzidziso ye "kudzidza masitayera" (iyo yakaratidza kuve isiriyo); iwo hausi mubvunzo wekurega mudzidzi kuti asarudze hunhu hunodiwa hwekudzidza (semuenzaniso, kutaridzika o kutaura) asi kuti ruzivo rwupfuure nenzira dzakawanda panguva imwe chete (semuenzaniso, visual e kutaura (panguva imwe chete).
Zvakawanda zvinosarira kunzwisiswa nezve kuitiswa kwecodhi kodhi, uye kumwe kutsvagurudza kunodiwa kujekesa kuti vadzidzisi vangatore sei mabhenefiti ekumiririrwa kwakawanda uye hukuru hwemifananidzo.
Mumamiriro echikoro, isu tine mikana yakawanda yekushandisa matekiniki achangotsanangurwa uye kuasanganisa iwo pamwe chete. Semuenzaniso, kugoverwa tsika kunogona kunyanya kusimba pakudzidza kana kuchisanganiswa neyakajairwa yekuzviongorora (kudzosa kubva mundangariro). Iyo yekuwedzera mabhenefiti ekuparadzira tsika inogona kuwanikwa nekuita mukuzviongorora-wega kakawanda, semuenzaniso, kushandisa kuyedza kuzadza mipata pakati pekuzorora.
Kuita kwakapindirwa zviri pachena kunosanganisira kugoverwa kweongororo (yakaparadzirwa tsika) kana vadzidzi vakachinjisa zvekare uye zvitsva zvinhu. Concrete mienzaniso inogona kuve ese ekutaura uye ekuona, nokudaro kushandisa kaviri kukodha zvakare. Uye zvakare, maitiro ekugadzirisa, mienzaniso yekongiri, uye kaviri kukodha zvese zvinoshanda zvakanyanya kana zvichishandiswa sechikamu chedzidzo yekudzidzira (kuzviongorora).
Zvisinei, hazvisati zvasimbiswa kana zvakanakira kusanganisa nzira dzekufunda idzi zvinowedzera, kuwanda kana, mune zvimwe zviitiko, zvisingawirirane. Saka zvinodikanwa kuti kutsvagisa kweramangwana zvirinani kutsanangura marongero ega (kunyanya akakosha ekugadzirisa uye kukodha kaviri), tsvaga nzira dzakanakisa dzekushandisa pachikoro, kujekesa mamiriro emuganho wezano roga roga uye kuongorora kupinda kwekudyidzana pakati pezvitanhatu nzira dzatakurukura pano. .
Weinstein, Y., Madan, CR, & Sumeracki, MA (2018). Kudzidzisa sainzi yekudzidza. Kutsvaga kwekuziva: misimboti uye zvazvinoreva, 3(1), 1-17.
kudzidza, maitiro ekuvandudza kudzidza, maitiro ekudzidza
Matekiniki Ekusimudzira Kudzidza: Ndeapi Chaizvo Anobudirira? Chikamu 22021-08-252021-08-25http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/tecniche-per-migliorare-lapprendimento.-quali-sono-davvero-efficaci.jpg200px200px